Fanaankii weynaa ee reer Masar Farouk al-Fishawi oo ku geeriyooday magaalada Qaahira… – Hagaag.com
Fanaankii weynaa ee reer Masar Farouk al-Fishawi oo ku geeriyooday magaalada Qaahira…
Posted on 25 Luulyo 2019 by Admin in fanka // 0 Comments
Fanaankii weynaa ee reer Masar Farouk al-Fishawi ayaa geeriyooday saacaddihii hore oo maanta Khamiis ah, kadib markii uu loolan adag la galay cudurka Kansarka, wuxuu ku dhintay da’da 67 jir.
Salaada janaazada ee marxuumka ayaa ka dhici doontaa masjidka Mustafa Maxamuud salaada duhurka kadib ee xaafada Muhandisiin ee Jiza magaalada Qaahira.
Al-Fishawi ayaa ku dhowaaqay dhowr bilood ka hor inuu haleelay cudurka Kansarka asaga oo ka qeyb galayey Bandhigga Filimada Alexandria ee wadamada Mediterranean-ka, hadal uu halkaasi ka jeediyey ayaa sheegay in dhakhtarkiisa ku wargeliyey si lama filaan ah inuu qabo cudurkaasi, wuxuu sheegay inuusan hadalka dhakhtarka dhibsan, wuxuuna u xaqiijiyey dhakhtarka inuu si aad ah ula dagaalami doono cudurka, wuxuu ka soo qaaday inuu la mid yahay madax xanuun keliya oo waqti gaaban jiraya iskana tagaya.
Xaaladiisa Caafimaad ayaa ka sii dartay waxaana loo qaaday isbitaal labo maalmood ka hor geeridiisa, muuqaalkiisii ​​ugu dambeeyay ee shacabka ayaa ahaa aaska jilaagii marxuum Izzat Abu Ouf horaantii bishaan.
Farouk al-Fishawi ayaa ka mid ahaa xiddigihii ugu muhiimsanaa fanka Masar sannadihii 1980-yadii iyo 1990-yadii, wuxuu ka qaybqaatay matalaada daraasiin filimo Masri ah, wuxuu kaloo leeyahay riwaayado badan.
Farouk al-Fishawi waa aabaha jilaaga reer Masar Ahmed al-Fishawi, waxaa xaas u ahaan jirtay fanaanada reer Masar oo ay kala tageen Sumaya al-Alfi oo ah hooyada wiilashiisa.انا لله وانا اليه راجعون